lonetone: စာအုပ်စာရင်း နိဒါန်း
ဂျပန်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း ၀ယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေ record တစ်ခုအနေနဲ့ စာရင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားထားတာတော့ ကြာပါပြီ။ စာရင်းလုပ်မထားရင်၊ များလာရင် မမှတ်မိ၊ နောက်သူငယ်ချင်းတွေကို ဌားလိုက်ပြီးရင် ပြန်တောင်းဖို့ မေ့သွားတာကြောင့် စာအုပ်တွေပျောက်ကုန်တာလည်း မကြာခဏကြုံဖူးပါတယ်။
စာရင်းမစခင် ကျွန်တော်ဘယ်လို စာအုပ်မျိုးတွေ ကြိုက်သလဲဆိုတာ နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စာအကုန်ဖတ်ပါတယ်။ အိမ်ကလည်း ဘယ်စာကိုဖတ်ရမယ်။ ဘယ်စာကို မဖတ်ရဘူး စသဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အချို့သော သူငယ်ချင်းများကို သူတို့ရဲ့အိမ်တွေက စာအုပ်ရွေးဖတ်စေတာမျိုး၊ ထိန်းချုပ်ထားတာမျိုးတွေ ရှိတာကြောင့် စာဖတ်ဝါသနာ လျော့ကုန်၊ ပျောက်ကုန်တာလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင်တော့ စာဖတ်နာလာရင် ဘယ်လိုစာကောင်းတွေ ရွေးဖတ်ရမယ်၊ ကိုယ်ဘယ်လိုစာမျိုးတွေ အားသန်တယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိလာမှာပါ။ အလိုလို အကောင်းအဆိုး ရွေးတတ်လာမှာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ အခုနောက်ပိုင်း သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားဆိုင်ရာ ဗဟုသုတရမယ့် စာပေတွေ၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (Biography) စာအုပ်တွေကို ကြိုက်လာပါတယ်။
Biography တွေကို ကြိုက်တာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ လူတွေအကြောင်း၊ သူတို့ တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘ၀တွေ အကြောင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်အတွက် အများကြီးရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေက ဖြစ်ရပ်မှန်တွေအပေါ် အခြေခံထားတာဖြစ်လို့ ကိုယ်စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက် တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သလို၊ ကိုယ်ပျင်းနေချိန် (အပျင်းထူနေချိန်) မှာလည်း ကိုယ့်ကိုကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်အောင် တွန်းအားပေးပါတယ်။ အဲ ကျွန်တော့်အဖေပြောနေကြ
ဆိုသလို၊ ကိုယ်ဘ၀င်မြင့်၊ မြောက်လာချိန်မှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆင်ခြင်နိုင်အောင် ထိန်းကြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် Biography တွေကို ကြိုက်ပါတယ်။
နောက်ဖတ်ဖြစ်တာတွေကတော့ fiction တွေပေါ့။ ဒါတွေကို ဖတ်တာ ကြိုက်လွန်းလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ English စာ တိုးတက်ချင်လို့ ဖတ်တာပါ။ အဲဒါတွေဖတ်တာများလာရင် စကားပြောတို့၊ အရေးအသားတို့ အနည်းငယ် တိုးတက်လာမယ်လို့ ထင်လို့ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက် အားသာချက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်တာကတော့ ကျွန်တော်က ရုပ်ရှင်ကြည့်တာနာတော့ (များတော့) fiction တွေဖတ်ရင်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရသလိုပဲ၊ မျက်စိထဲမြင်လာပါတယ်။ ပိုပြီးရှင်းလင်းလာတယ်ဗျ။ (ရုပ်ရှင်များများကြည့်ပြီး၊ စာပါတွဲဖတ်ရင် အခုကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုး ကိုယ်တိုင်ကြုံလာမှာပါ။) အဲ...ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ ဒုန်းဒိုင်းနဲ့ သေနတ်ပစ်၊ ဖိုက်တင်ချပြီး ပြီးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးကိုပဲ မဆိုလိုပါ။ အဲဒါတွေအပါအ၀င် Drama, Romance, Comedy, Documentary နဲ့ (based on True Story) ဆိုတာမျိုးတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ နောက်မှ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ အကြောင်း ပြောပြပါ့မယ်။
ကဲ၊ စာအုပ်စာရင်း မလုပ်ခင် နိဒါန်းပျိုးလိုက်တာ အတော်များသွားတာမို့ စာအုပ်စာရင်း အခုစလုပ်ပါတော့မယ်။
Posted by lonetone at 4:42 AM
Your book collections and passion about books are really awesome !! Got inspirations from your posts to read more English books, especially biography ones. Cheers, bro!! Thanks for the valuable posts and your sharing of experiences !
ငသော် December 2, 2010 at 9:27 AM
အကိုလုံး စာအုပ်တွေ ထားစရာမရှိရင် ချိဘ ဘက်ပစ်လိုက်ဗျနော်။း))